उपत्यकामा थप ११७७ संक्रमण पुष्टि, देशभर कति पुगे ? — onlinedabali.com
उपत्यकामा थप ११७७ संक्रमण पुष्टि, देशभर कति पुगे ?
डबली संवाददाता२०७७ असोज १७ गते
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ११ सय ७७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोरोना सम्बन्धि नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौंमा एक ११०० भक्तपुरमा ६७ र ललितपुरमा १०९ जना रहेको बताएको छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाका तिनै जिल्ल पांच सय भन्दा बढि संक्रमित हुने जिल्लाको सुचिमा रहेको छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ८ जनाको निधन भएको छ । यो सहित हाल सम्म निधन हुनेको संख्या ५२८ जना रहेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा थप २ हजार १२० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । यो हिजोको तुलनामा कम हो । हिजो नेपालमा एकैदिन अहिलेसम्मकै २७ सय २२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोरोना सम्बन्धि नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा २१२० जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी गराएको छन् । यो सगै हाल सम्म ८४ हजार ५७० जनामा कोरोना संक्रमण भईसेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा थप २ हजार ४४ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका जानकारी गराएको छन् । हाल सम्म निको हुनेको संख्या ६२ हजार नाघेको छ । हाल ६२ हजार ७४० जना कोरोना मुक्त भएर घर फकेको छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर ४२ सय ४३ जना करेन्टाइनमा रहेको छन् । हाल ९ हजार ७७३ जना संस्थागत आइसोलेशनमा रहेका छन्। हाल २१ हजार ३०२ जना र्आसोलेसन्मा रहेको छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा १२ हजार ९७८ जनाको पीसीआर भएको छ । यो सहित हाल सम्म १० लाख ६१ हजार ६६४ जनाको कोरोना परिक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा भारी बर्षाः भित्र्याउन लागेको धन बगायो, नदीमा पानीको तह खतराभन्दा माथि
गृहमन्त्रीले गरे पाँच जिल्लाका सिडिओ सरुवा, कुन जिल्लामा को ?
पहिलो पटक साफ फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली टीम स्वादेश फर्किँदै, भव्य स्वागत गरिने
एकीकृत समाजवादीको ३३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, झलनाथ खनाल सम्मानित नेता